I-BRITNEY SPEARS KUNYE NE-BOYFRIEND SAM ASGHARI SPARK ENGAGEMENT RUMOR - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato I-Britney Spears kunye ne-Boyfriend Sam Asghari Spark Engagement Rumors kwiRed Carpet
UBritney Spears noSam Asghari baya kwimifanekiso yakwaSony '' Kanye emva kwexesha ... eHollywood 'INkulumbuso yaseLos Angeles ngoJulayi 22, 2019 eHollywood, California. (Ifoto ngu-Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)
Ngu: Esther Lee 07/23/2019 ngo-11: 30 AM
Yhu… mhlawumbi uphinde? I-pop superstar Britney Spears kunye nesoka lakhe uSam Asghari bavusa amarhe okuzibandakanya kulandela ukubonakala kwekhaphethi ebomvu ngoMvulo, nge-22 kaJulayi.
Imvumi yaya kwi-premiere ye-LA ye Ngamaxesha athile eHollywood kunye no-Asghari ngokuhlwa ngoMvulo enxibe ilokhwe ebomvu ebomvu, kodwa yayiyidayimani kumnwe wakhe wasekhohlo owawubambe umdla wababukeli.
Isiqwenga ngokwaso sisangqa sedayimane elikwi-mutli kwibhanti emhlophe yegolide okanye yeplatinam. Ngaphandle kokuqinisekisa naluphi na uhlaziyo lobume bobudlelwane, uSpears uthathe nje waya kwi-Instagram ngoMvulo ebusuku ukuze abelane ngemifanekiso nomhle wakhe. Amagqabantshintshi athi, Inkulumbuso yethu yokuqala.
UAsghari uphawule, Umhla wam omhle.
IHOLLYWOOD, ECALIFORNIA-JULAYI 22: IBritney Spears ifika kwiSony Pictures 'Kanye emva kwexesha… KwiHollywood Los Angeles Premiere ngoJulayi 22, 2019 eHollywood, California. (Ifoto ngu-Steve Granitz / WireImage)
wenza nini ishawa yomtshato
Inkulumbuso yethu yokuqala @️ @samasghari
Iposi ekwabelwana ngalo ngu Britney Spears (@britneyspears) ngoJulayi 22, 2019 kwi-7: 34 pm PDT
I-Spears yatshata u-Jason Alexander ngo-2004 mhlawumbi ngowona mfutshane umtshato we-celeb kwiiyure ezingama-55. Uqhubeke watshata noKevin Federline ngasekupheleni kuka-2004, ngoku abelana naye ngoonyana ababini uJayden noPreston.
Indawo yangaphakathi yokuthuka
Jonga umva kwakhona ukuze ubone ukuba ii-Spears kunye nesoka lakhe u-Asghari, bayabandakanyeka na.
isitulo sokulinganisa ubukhulu
Indlu yokubiyela emhlophe
indlela yokubopha itue
imbeko umfazi wakho